Ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ weebụ Web Mobile | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ weebụ Web Mobile
Fraịde, Septemba 7, 2012 Adam Obere
Pasent 46 nke ndị bi na United States nwere ama ụfọdụ ụdị. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya enyere na e nwere ọtụtụ ndị folks na njedebe ọ bụla nke mgbịrịgba afọ. Ekwentị bụkwa ụzọ bụ isi ndị mmadụ na-ejikọ na weebụ, ọ bụghị nke abụọ. Desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ na-adịghị na gị 24/7 - ọbụna a mbadamba bụ - ma gị mobile ngwaọrụ bụ. N'ụwa niile, ọnụọgụ ndị mmadụ na-eji mkpanaka iji nweta weebụ dị elu karịa. Maka ọtụtụ mba, ọ bụ naanị ụzọ ha si enweta.
Ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ weebụ Web Mobile ekpuchi ọhụrụ online mobile okporo ụzọ ọnụ ọgụgụ gụnyere mobile search engine mbak, US M-azụmahịa ahịa, Mobile okporo ụzọ na Top 500 E-Retailers na ọtụtụ ndị ọzọ.
Yana ịbụ a nkwurịta okwu na ngwaọrụ, a mobile ngwaọrụ na-aghọ a shopping enyemaka n'ihi na ya portability, nnweta ego na Kupọns, ike mfe ime ngwaahịa nnyocha na… na a abụọ tinyekwa na mkpọsa na-echekwa mgbe a ngwaọrụ bụ na ngwaahịa.
Ozi nkowa mgbakwunye site Gaa-Globe.com
Tags: mba ofesim-azụmahịaazụmahịamobile òkèmobile weebụ okporo ụzọweb okporo ụzọ
Ntughari gị na-eme nyocha na enweghị ntụkwasị obi